ဂူဂဲလ် Pixel3၏မှော် - ညဘက်ဓါတ်ပုံများကို 'Night Sight' | Androidsis
ဂူဂဲလ် Pixel3၏ 'Night Sight' mode ဖြင့်လျှပ်တစ်ပြက်မီးအလင်းမရှိဘဲညဥ့်၏ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်း
နာရီအနည်းငယ်အကြာညအလင်းရောင်မလိုအပ်သည့်ဓာတ်ပုံကိုမျှဝေခဲ့သည်။ Google Pixel3၏ဓာတ်ပုံနှစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက် Nightless Sight ဟုခေါ်သော flashless mode ဆော့ဖ်ဝဲဓာတ်ပုံပညာတွင် Google ၏ကြီးမားသောခြေလှမ်းကိုဖော်ပြသည်။ ပြီးတော့ဒါကမှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်းပဲလိုတာပဲ။
ဂူးဂဲလ်က၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် သူတို့ရဲ့ဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ပိုသုံးမယ် y နောက်ခံအတွက်အသုံးပြုဟာ့ဒ်ဝဲထားခဲ့ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျန်ထုတ်လုပ်သူများကသူတို့၏ဖုန်းများ၌၎င်းတို့၏ GB တွင်မည်သည့်မှန်ဘီလူးနှင့် RAM မည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ G သည်ကြီးမားသော Artificial Intelligence + Software + Hardware ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ထိုအခါ Google Pixel3ဓာတ်ပုံရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
1 ဓာတ်ပုံတစ်ပုံသည် megapixel တစ်ထောင်တန်သည်
2 Pixel3၏ Night Sight နောက်ကွယ်မှမှော်
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံသည် megapixel တစ်ထောင်တန်သည်
ထိုဓာတ်ပုံသည် Sebastiaan de With မှလွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်သို့မဟုတ်၎င်းသည် Google မှပြုလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည် အဲဒါက အရာအားလုံးပြသနိုင်ဖို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဓာတ်ပုံ ပြီးတော့ဂူးဂဲလ်ဟာယှဉ်ပြိုင်မှုတွေမတိုင်ခင်နှစ်အနည်းငယ်လောက်မှာပေါ့ ငါတို့တွေ့မြင်ရပြီ ကင်မရာ ၄ ခုပါရှိသည် အသစ်က A9 ၌တည်၏။ အလားတူပါပဲ Pixel3၏အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်.
နှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုနှင့်သင်ရင်ဆိုင်နေရသည် "Night Sight" mode အသစ်ဖြင့်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံ ကြောင်း mode ကို activated မပါဘဲ Pixel3နှင့်အခြား၏။ ကွဲပြားခြားနားမှုများသည်၎င်း flash ကိုအသုံးမပြုသည့်ဓာတ်ပုံအတွက်မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဆွဲဆောင်ခြင်းဖြင့်ကျန်ရစ်ခဲ့သောထိုခမ်းနားသောဓာတ်ပုံကို "ဥာဏ်ရည်" ဖြင့်ပြုလုပ်ရန် algorithms နှင့် software ကိုအသုံးပြုသည်။ ရက်ချိန်းကိုလွမ်းတယ် သင်၏မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ဂူဂဲလ်ကင်မရာအက်ပ်၏ port ကိုထည့်ပါ.
ဤဓာတ်ပုံကိုအခြားမြင့်မားသောဖုန်းများကမှန်ဘီလူးဖြင့်ရိုက်ယူနိုင်သည်ဆိုပါကယခုခေတ်၏တောက်ပမှုနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်ပိုမိုရရှိသည်။ သို့သော် Pixel3၏မှော်သည်ဆူညံသံမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါဆိုလိုတာက လုံးဝကလျှော့ချခဲ့သည်ISO သတ်မှတ်ချက်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဆူညံသံပမာဏတိုးပွားစေသည်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောပေါက်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာလူမှုကွန်ယက်တွေမျှဝေဖို့အလွန်သန့်ရှင်းပြီးပြီးပြည့်စုံတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုပါ။
ညနောက်ကွယ်မှမှော် မျက်မှောက် Pixel 3
ညနောက်ကွယ်မှမှော်ကိုနားလည်ရန် မျက်မှောက် ကျနော်တို့ကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသွားဖို့ရှိသည် Aprilပြီလ 25, 2017 ရက်တွင် Google ကထုတ်ဝေသည်။ တစ်ခု«Nexus နှင့် Pixel ဖြင့်စမ်းသပ်သည့်ညဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း»။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိရွှေဂိတ်၏ညကောင်းကင်ယံ၏ DSLR ဖြင့်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံကိုကိုးကားထားသည်။
၎င်းကိုကိုင်တွယ်သောဂူဂဲလ်သုတေသနအဖွဲ့သို့ခေါ်ယူခြင်းဖြင့် ကွန်ပျူတာဓာတ်ပုံနှင့် algorithms ဖွံ့ဖြိုး မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် "ကူညီ" ရန်အသင်းဝင်တစ် ဦး ကဂူဂဲလ်ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ Florian Kainz အား၎င်းကိုထပ်မံယူရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်၊ သို့သော်ယခုအကြိမ်တွင်မိုဘိုင်းကင်မရာနှင့်အတူ။
ဤဆောင်းပါးတွင်သူသည် HDR + မုဒ်ကိုသက်ဝင်နိုင်သည့်ရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲ၏စီးဆင်းမှု - အခြေစိုက်စခန်းမှသုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြန်လည်ပြောပြသည်။ Nexus နှင့် Pixel ကင်မရာအက်ပ်တွင်ဤ HDR + မုဒ် အလင်းနည်းသောနေရာများတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည် ကွဲပြားသောထိတွေ့မှုများတွင်ရိုက်ချက် ၁၀ ခုကိုအမြန်ရိုက်ကူးခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အဖြစ်တစ် ဦး ကနောက်ဆုံးယူသည်။ ဤလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက် HDR + တွင်အကန့်အသတ်ရှိသည်။
ဒီမှာ ရလဒ်တစ်ခု posteriori အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်ချက်နှင့်အတူ။ ညာဘက်ရှိနောက်ဆုံးပုံသည်ရရှိသောရလဒ်ကိုပြသသည်။
Kainz ၏ဆောင်းပါးပါရုပ်ပုံများအချို့တွင်ပြသထားသည့်အလင်းနည်းသည့်ဓာတ်ပုံများတွင်ရလဒ်ကောင်းများရရှိရန်စမ်းသပ်မှုများသည် ထပ်မံ၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Kainz ကြောင်းပြောပြနိုင်ခဲ့သည် ညကင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးရန်ဖုန်းကင်မရာများ; လက်ဖြင့်မျက်နှာဖုံးများကို“ ဆေးသုတ်ခြင်း” စသည့်အဆင့်များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သောမိုဘိုင်းပေါ်ရှိသင့်တော်သောဆော့ဝဲလ်ဖြင့်အမြဲတမ်း။
ဒီနေ့ခေတ်မှာရှိနေတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲဟာအဲဒီလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ် Pixel3၏ Night Sight mode ဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ, flash ကိုအသုံးမပြုနှင့်ဤအချက်ကိုရိပ်မိနိုငျသောပြထားတဲ့နှိုင်းယှဉ်၌ရှိသကဲ့သို့။ မည်သည့်မီးကိုမျှမသုံးပါဟုသင်ကြားပြီးပြောသောမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုမယုံပါ။ ဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအတွက်ဂူဂဲလ်ကstepရာမခြေလှမ်းပဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » ဂူဂဲလ် Pixel3၏ 'Night Sight' mode ဖြင့်လျှပ်တစ်ပြက်မီးအလင်းမရှိဘဲညဥ့်၏ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်း
Google Play တွင်ပြန်အမ်းငွေမည်သို့ရမည်နည်း